Torohevitra sy tetika hahafantarana ny fomba fanadiovana ny lafaoro voajanahary | Green Renewable
Ahoana ny fomba fanadiovana ny lafaoro
Imbetsaka isika no mila manadio lakozia ary matahotra mandrakariva amin'ny zavatra iray isika: manadio ny lafaoro. Raha ny mahazatra, ny vokatra fanadiovana dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fomba stratejika mba tsy ho simba na sempotra amin'ny setroka misy poizina isika rehefa manasa azy. Noho izany, tsy maintsy fantatrao izay vokatra azo fidiana amin'ireo olona an-tapitrisany eny an-tsena.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aminao izahay ny fomba fanadiovana ny lafaoro amin'ny fomba mahomby sy mba tsy hanimba ny tontolo iainana na ny firafitry ny fitaovana.
1 Vokatra fanadiovana sahaza
3 Soda fanendasana ary afangaro amin'ny vinaingitra
4 Masirasira, sira ary voasarimakirana
Vokatra fanadiovana sahaza
Mba hanadiovana ny lafaoro dia mila mahafantatra ny fomba hisafidianana ireo vokatra an'arivony eny an-tsena ianao. Misy ireo safidy voajanahary izay mandaitra mitovy amin'ny zavatra simika ary misy valiny tena tsara. Ny olana lehibe miseho amin'ny vokatra simika dia ny fanelingelenana ny maso, ny moka ary hamela fofona tsy mahafinaritra tsy ao an-dakozia ihany, fa manerana ny trano koa.
Ny vokatra voajanahary dia nampiasaina tao an-trano nandritra ny androm-piainany mba hodiovina ary anio, hampiasa ireo vokatra ireo isika hanadiovana ny lafaoro. Raha ny mahazatra, rehefa miresaka momba ny vokatra voajanahary isika dia toa manahirana ary tsy mandeha izany. Toy izany koa ny aretina. Ny fanafody vita amin'ny akora simika dia aleony foana mampiasa fanafody voajanahary izay tsy misy vokany voaporofo. Na izany aza, amin'ity tranga ity dia voaporofo fa ireo vokatra voajanahary ireo dia mahomby ihany ary ambonin'izany dia tsy hanimba ny tontolo iainana na hamela rivotra misy poizina ao an-trano.
Ny mpanjaka amin'ny fanadiovana voajanahary dia voasarimakirana sy vinaingitra. Raha miaraka amin'ireto vokatra ireto isika amin'ny bikarbonate dia mahita fangaro mahomby tokoa isika. Bicarbonate dia vokatra simika fa manana fampiasana tsy mampidi-doza ary matetika aza dia entina amin'ny zava-pisotro malefaka hitsaboana entona vavony sy tsy mahazo aina amin'ny ankapobeny. Ity fifangaroana ity dia manana laza tsara ho an'ny fanesorana ireo menaka sy loto rehetra ao anaty lafaoro. Asa izay tokony hatao matetika kokoa ao an-trano fa kamo be foana.
Ny manadio ny lafaoro, ny vinaingitra, na dia tsy mahafinaritra tanteraka aza ny fofona, dia mpiara-miasa mety hitranga. Manana toetra mampiavaka ny bakteria sy ny otrikaretina izy io, ka io dia be mpampiasa koa hanadiovana voankazo sy legioma alohan'ny handaniana azy. Safidy tsara dia ny manomana famafazana rano mifangaro amin'ny tavoahangy misy rano sy vinaingitra. Mitazona ny tahan'ny rano amin'ny faritra 3 sy ny vinaingitra 1 fotsiny izahay. Amin'izany fomba izany, tsy ho maimbo ny fangaro.
Tsy tokony hatahotra ianao raha misy fofona vinaingitra amin'ny voalohany, satria fofona mandalo vetivety izy io. Ity famafazana ity dia ampiasaina handefasana ny rindrin'ny lafaoro. Mba hanaovana izany dia hampiharintsika izy ary avelantsika hiasa mandritra ny minitra vitsy. Raha vantany vao lasa io fotoana io dia hosasanay rano izy io ary ho hitantsika ny vokany.
Raha tsy maloto loatra ny lafaoro dia tsy ilaina ny manadio lalina. Manao zavatra haingana fotsiny. Azontsika atao ny mameno ny fitoeran-drano amin'ny rano mafana 2 vera sy vinaingitra 1. Avadintsika 200 degre ny lafaoro ary avelantsika hihazakazaka mandritra ny 30 minitra. Aorian'izany dia handalo lamba mando amin'ny rindrin'ny lafaoro isika, eo amin'ny vera, sns. Ho hitanao fa ny etona avy amin'ny vinaingitra dia ho ampy hamoahana ny loto rehetra.
Soda fanendasana ary afangaro amin'ny vinaingitra
Baking soda dia misy fampiasana marobe ao an-trano. Vokatra mora vidy tokoa izay ahitantsika azy na aiza na aiza. Izahay dia hanazava ny fomba fanadiovana ny lafaoro amin'ny soda. Tsy maintsy hofafazanao mivantana amin'ny faritra ambany izy io raha misy sisa tavela amin'ny sakafo tafahitsoka ary hofafazana avy eo miaraka amin'ny famafazana rano sy vinaingitra noresahintsika tetsy ambony.
Ny fomba iray hafa mahomby kokoa amin'ny fampiasana soda dia ny fanaovana paty misy soda, rano ary vinaigitra. Ity paty ity dia mahatonga azy io hifikitra tsara kokoa ary azo ampiasaina amin'ny rindrin'ny lafaoro. Mila mametraka lovia iray misy soda 10 lovia kely, rano mafana 4 ary vinaingitra 3 fotsiny ianao. Amin'ity fangaro ity dia hanampy kely ny vinaingitra izahay, satria hisy vokany eo amin'ny fitomboan'ny volony. RAHA hitantsika fa be loatra ny fangaro, dia hanampy bicarbonate fanampiny isika.
Manaraka izany dia haparitakay manerana ny lafaoro ary hohamafisinay kokoa ireo faritra izay maloto indrindra na misy tavela amin'ny sakafo. Avelantsika hiasa mandritra ny ora vitsivitsy ny fangaro. Raha avo dia avo ny loto dia avelantsika mandritra ny alina izy io. Tsy mila mikosoka isika, satria miaraka amin'io fangaro io dia mivoaka ho azy ny loto. Raha te hanafainganana ny fizotrany isika satria manam-potoana kely dia alefantsika ny lafaoro ary avelantsika hihetsika mandritra ny fotoana fohy miaraka amin'ilay fangaro ao anatiny. Amin'izay dia hiala haingana kokoa ny loto ao anaty lafaoro.
Masirasira, sira ary voasarimakirana
Izy io dia vokatra iray hafa izay manampy amin'ny fanadiovana ny lafaoro. Ny koba izay nataontsika teo aloha tamin'ny soda sy vinaingitra dia azo atao amin'ny masirasira sy vinaingitra ihany koa. Tsy dia ampiasaina io fangaro io, satria ilaina ny mampiasa masirasira be dia be. Soda fanendasana no tiana kokoa satria haingana sy mahomby kokoa. Na izany aza, hanazava ny fomba fanadiovana ny lafaoro amin'ny masirasira isika.
Manamboara fangaro fotsiny toy ny teo aloha izay hanampianay rano sy vinaingitra amin'ny vera mitovy amin'ny teo aloha ihany, fa miaraka amin'ny masirasira mandra-pahatongan'ny fangaro mifangaro toy ny paty.
Raha tsy manana vinaingitra ao an-trano isika, dia afaka mampiasa sira madity. Azontsika atao koa ny mampiasa azy raha manelingelina antsika indrindra ny fofon'ny vinaingitra. Azontsika soloina sira ny vinaingitra, izay otrikaina ihany koa. Izy io dia hanampy antsika hanala ny fofona ratsy, indrindra raha nanomana trondro ao anaty lafaoro isika. Tsy maintsy avelantsika fotsiny ilay fitoeran-lafaoro, ampio sira miaraka amin'ny ranom-boasarimakirana iray sy ny hodiny ary avelao izy hiasa. Ny tsara indrindra dia ny mampiasa ny hafanana sisa tavela aorian'ny fampiasana ny lafaoro hanaovana ny trondro.
Amin'izany fomba izany azonao atao ny manadio ny lafaoro tsy misy fofona manitra. Manampy amin'ny fanalana mora foana ny loto ny etona.
Manantena aho fa miaraka amin'ireo fitaka ireo dia hainao ny manadio ny lafaoro tsy misy akora simika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Ahoana ny fomba fanadiovana ny lafaoro
Famaritana ny fampandrosoana maharitra